ကလိုရင်းကနေသင့်ရဲ့ဆံပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား "ဘယ်လိုကလိုရင်းကနေသင့်ရဲ့ဆံပင်ကာကွယ်ပေးရန်? - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ကလိုရင်းကနေသင့်ရဲ့ဆံပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 22 စက်တင်ဘာလ 2019
နွေရာသီရဲ့ဆိုက်ရောက်နှင့်တကွ, ရေကန်ဖြည့်ဖို့စတင်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အခြို့သောအတိုင်းလိုက်နာရန်အသုံးပြုလျှင် အဆိုပါ gyms အတွက်ရေကူးကန်ကနေကလိုရင်းကနေဆံပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ, အဘယ်ကြောင့်အများပြည်သူရေကူးကန်များအတွက်ထိုသို့ပြုသည်မဟုတ်လော
အများပြည်သူရေကန်သို့မဟုတ်စင်တာများအတွက် spa, ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းရေကူးထုပ်ကိုသုံးပါရန်အကြံပြုသည်။ ရေကို soiling ရှောင်ရှားရန်, ဒါပေမယ့်လည်းဆံပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သာ။
ကလိုရင်း disinfects တဲ့ဓာတုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မကြာခဏရေကူးကန်ကိုသွားကတည်းက ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပင်ခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်လာကြည့်ဖို့ကြွပ်ဆတ်အံ့သြစရာဖြစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ် တောက်ပ သဘာဝက။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဖြစ်ပျက်မှဤကာကွယ်တားဆီးဖို့အကြိမ်ကြိမ်လှည့်ကွက်ရှိပါသည်။
ဤသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပင်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ် သူတို့သည်ရေနှင့်အဆက်အသွယ်မရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား, မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထည်, ဆီလီကွန်: အမျိုးမျိုးသောထိုအရေကူးထုပ်လုပ်ပစ္စည်းများရှိပါတယ် polyurethane နှင့်ရာဘာစေး။ ဒါကြောင့်သင်ကဦးထုပ်ထားကျနော်တို့ကိုဖယ်ရှားသည့်အခါဆံပင်ထွက်ကျရောက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ရာဘာစေးနှင့်အတူအထူးသဖြင့်သတိထားပါ။
သငျသညျအများပြည်သူရေကူးကန်တစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားသည့်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ချင်ကြဘူးလျှင်, မထိခိုက်စေရှောင်ရှားရန်လိုရင်းကိုတားဆီးဖို့လမ်းလည်းမရှိ ဆံပင်ဖိုင်ဘာ။ ရိုးရှင်းစွာ, ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆီအနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, argan ဆီ, အုန်းသီးသို့မဟုတ်သံလွင်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: အရမ်းပိန်ဆံပင်စစ်တိုက်ခြင်းငှါ5အိမ်မှာကုသ
ရေကန်ကနေကလိုရင်းကနေဆံပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းရန်ဖြစ်ပါသည် ယင်းနှင့်အတူယခင်ကစိုစွတ်သောရေအေး။ ငါတို့သည်လည်းထိုသူတို့ကိုလျှော်ပေးနိုင်သည်။ အမှန်မှာဒီရိုးရှင်းတဲ့အမူအရာကလိုရင်းနှင့်အတူရေစုပ်ယူရာမှဆံပင်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။
သို့သျောလညျး အမြဲတမ်းကအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အတူဤလှည့်ကွက်ပေါင်းစပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် သင့်ရဲ့ဆံပင်တက်ကာကွယ်ပေးဖို့။
ကျွန်တော်တစ်ဦးရေချိုးဦးထုပ်ကိုသုံးပါပေမယ့်, တကလျှောက်ထားရန်အစဉ်အမြဲကောင်းလှ၏ မျက်နှာဖုံး ရေကူးကန်ပြီးနောက်သင့်လျော်သော။ အဲဒီမှာကုန်သွယ်မှုအတွက်အဆင်သင့်လုပ်ဖော်မြူလာဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့် ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာဆံပင်မျက်နှာဖုံးများကိုပွငျဆငျနိုငျပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သဘာဝအမျက်နှာဖုံးများနှင့်သင်၏ခြောက်သွေ့သောဆံပင် moisturize 5
လူအပေါင်းတို့သည်ယခင် options များအပြင်, မေးခွန်းဆိုးဆံပင်ပေါ်ပေါက်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူ၏ဆံပင်သို့မဟုတ်အနည်းငယ် strands ဆေးဆိုးထားပြီးသူမှန်မှန်ဖြစ်ပျက် သူတို့အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်လာကြောင်းမှတ်ချက်ချ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကအထက်အကြံပေးချက်များလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်လည်းငါတို့ဆံပင်အမျိုးအစားများအတွက်တိကျသော Shampoo & သုံးပြီးများ၏အလေ့အထသို့ရသာ။ ဥပမာအားဖြင့်, အရောင်ချွတ်ထားတဲ့ဆံပင်အဘို့, ကျနော်တို့အထူးထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့ရှိသည်။
ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, ရေကန်ကနေကလိုရင်းကနေဆံပင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ တကယ်ကဒီအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျဤအစီအမံများအကောင်အထည်ဖော်ရအရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့မကြာခဏရေကူးသွား၏သို့မဟုတ်မ။
ဒါ့အပြင်စောင့်ရှောက်မှုဆိုးဆံပင်၏ဖြစ်ရပ်တွင်ပိုမိုတိကျသောကြောင်းကိုသတိရပါ။ အရောင်အပြီးတစ်ပတ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲနေတဲ့ဦးထုပ်နှင့်အတူရေကူးဖို့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် အရောင်မြားတှငျပွောငျးလဲတားဆီး။
ထိုအသင်, သင်မည်သို့ရေကန်ကနေကလိုရင်းကနေသင့်ရဲ့ဆံပင်ကာကွယ်ပေးသလဲ? သငျသညျအစဉျအမွဲအထက်ဖြေရှင်းနည်းများကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသလော ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါ!
အရာဝတ္ထု shaped Discover 8 အလွရေကန်
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ object တစ်ခုနှင့်အတူပါဆုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရေကူးကန်များတစ်ရွေးချယ်ရေးတင်ပြ။ သငျသညျအံ့သြသွားပါလိမ့်မည်, Read more »
ဝက်ခြံဆက်ဆံဖို့အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်အကူအညီနဲ့နိုင်သလား? - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ